စာမေးပွဲရာသီမှာ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ရအောင်ပရိသတ်တွေအတွက် မေတ္တာရပ်ခံစာေ ရးသားလိုက်တဲ့ မြန်း( ဝင့်ယမုံနိုင်) - Cele GabarCele Gabar
ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်အားပေးလျက်ရှိတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဝင့်ယမုံနိုင်ကို အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုဖူးထင်ပါတယ်နော်။ကျရာဇာတ်ရုတ်တိုင်းကို ဆေးစက် ထင်ထင်သရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ဝင့်ယမုံနိုင်ဟာ လက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ “ကျမက မဟေသီ” စတဲ့ Mrtv-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မြန်း ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်အဖြစ် တစ်သားတည်း သဘာဝကျကျ ဇာတ်ရုပ်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်ပြခဲ့တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ မျက်နှာပွင့်သူလေးပေါ့ ။စာမေးပွဲရာသီကို ရောက်ရှိလာတာကြောင့် ဝင့်ယမုံနိုင် က အားပေးကျတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ပရိသတ်တွေကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။
မြန်း တစ်ဖြစ်လဲ ဝင့်ယမုံနိုင်က “စာမေးပွဲကာလ တစ်ပတ်လေးတော့စာကိုပဲအာရုံစိုက်ကျက်ကြပါနော် …. ဆယ်တန်းလေးတွေရော … တက္ကသိုလ်သမားတွေရော …. ပြီးသွားမှဇာတ်လမ်းတွဲကို တစ်ရက်မှမလွတ်ဘဲ တစ်ဝကြီးကြည့် …. လွတ်သွားတဲ့ တစ်ပတ်စာလေးကိုတော့ Pyone Play ကနေပြန်ပြီးကြည့် …ကျွန်မကမဟေသီက ၄၃ပိုင်းတောင်ဆိုတော့ စာမေးပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှီတယ်နော် ကလေးတို့ … မတ်မတ်မြန်းစကားနားထောင်ပါ” လို့ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း စာမေးပွဲတစ်ဖက် ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ဖက် လွန်ဆွဲနေတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို မှတ်ချက်တွေကနေလည်း ပြောပြထားသေးတာပါ ။ ဆယ်လီကမ္ဘာ က ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား ပရိသတ်တွေကော မြန်းရဲ့စကားကို နားထောင်ကြမှာလား ဆိုတာ မှတ်ခက်က နေ ပြောပြခဲ့ကြပါနော်။
Source – Wint Yamone Naing
စာမေးပှဲရာသီမှာ အနှောငျ့အယှကျမဖွဈရအောငျပရိသတျတှအေတှကျ မတ်ေတာရပျခံစာေ ရးသားလိုကျတဲ့ မွနျး( ဝငျ့ယမုံနိုငျ)
ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျတှကေ ခဈြခငျအားပေးလကျြရှိတဲ့သရုပျဆောငျမငျးသမီး ဝငျ့ယမုံနိုငျကို အထူးတလညျမိတျဆကျပေးစရာ မလိုဖူးထငျပါတယျနျော။ကရြာဇာတျရုတျတိုငျးကို ဆေးစကျ ထငျထငျသရုပျဆောငျတတျတဲ့ ဝငျ့ယမုံနိုငျဟာ လကျရှိထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ “ကမြက မဟသေီ” စတဲ့ Mrtv-4 ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲမှာ မွနျး ဆိုတဲ့ ဇာတျကောငျအဖွဈ တဈသားတညျး သဘာဝကကြ ဇာတျရုပျပိုငျနိုငျစှာ သရုပျဆောငျပွခဲ့တာကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှကွေားမှာ မကျြနှာပှငျ့သူလေးပေါ့ ။စာမေးပှဲရာသီကို ရောကျရှိလာတာကွောငျ့ ဝငျ့ယမုံနိုငျ က အားပေးကတြဲ့ ကြောငျးသားကြောငျးသူ ပရိသတျတှကေို လူမှုကှနျရကျပျေါကနေ မတ်ေတာရပျခံလိုကျပါတယျ။
မွနျး တဈဖွဈလဲ ဝငျ့ယမုံနိုငျက “စာမေးပှဲကာလ တဈပတျလေးတော့စာကိုပဲအာရုံစိုကျကကျြကွပါနျော …. ဆယျတနျးလေးတှရေော … တက်ကသိုလျသမားတှရေော …. ပွီးသှားမှဇာတျလမျးတှဲကို တဈရကျမှမလှတျဘဲ တဈဝကွီးကွညျ့ …. လှတျသှားတဲ့ တဈပတျစာလေးကိုတော့ Pyone Play ကနပွေနျပွီးကွညျ့ …ကြှနျမကမဟသေီက ၄၃ပိုငျးတောငျဆိုတော့ စာမေးပှဲပွီးတဲ့အခြိနျမှီတယျနျော ကလေးတို့ … မတျမတျမွနျးစကားနားထောငျပါ” လို့ ရေးသားထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး စာမေးပှဲတဈဖကျ ဇာတျလမျးတှဲတဈဖကျ လှနျဆှဲနတေဲ့ စိတျခံစားခကျြတှကေို မှတျခကျြတှကေနလေညျး ပွောပွထားသေးတာပါ ။ ဆယျလီကမ်ဘာ က ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသား ပရိသတျတှကေော မွနျးရဲ့စကားကို နားထောငျကွမှာလား ဆိုတာ မှတျခကျက နေ ပွောပွခဲ့ကွပါနျော။
Previous Previous post: ဖေဖေ့ရဲ့သားဖြစ်ခွင့်ရတာ ဘုရားပေးတဲ့ဆုလာဘ်ပါပဲဆိုတဲ့ သီဟအောင်
Next Next post: အမှိုက်ကောက်တယ်ဆိုတာက နာမည်ကြီးချင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ဇွဲပြည့်နဲ့ဖိုးပြည့်
လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ကိုကိုဦးရဲ့သားလေး သီဟအောင်ရဲ့ အမိုက်စား tik tok လေးများ
Published: March 8, 20196:49 pm
ရွှေမှုန်ရတီ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်မေ့ခဲ့ပြီလား …..အတိတ်က ရွှေမှုန်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ
Published: November 13, 201811:07 am
အစ်မဖြစ်သူ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို အိမ်ထောင်မပြုစေချင်တဲ့ နဒီရွှေရည်
Published: February 28, 20195:35 pm
အက်ရှင်မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်မသိသေးတဲ့ အကြောင်းများ
Published: December 29, 20187:05 am
တာဝန်ပျက်ကွက်ခဲ့မှုအတွက် လူသိရှင်ကြားတောင်းပန်လိုက်ရတဲ့ သက်မွန်မြင့်
Published: January 29, 20191:58 pm Updated: 2:40 pm
အကယ်ဒမီ ရွှေကြယ်လေးကို ဘုရားမှာလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ခိုင်သင်းကြည်
Published: January 3, 20193:03 pm
ညီအစ်မတွေအလား တွဲဖက်ကြော်ငြာရိုက်ခဲ့ကြတဲ့ ထိပ်ထိပ် နဲ့ မေမေခိုင်သင်းကြည်
Published: December 1, 20182:39 pm
သူနာပြုတက္ကသိုလ်မှာသွားရောက် ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ရဲလေးနဲ့ သူနာပြု ဆရာမလေး တွေရဲ့ ကြည်နူးစရာမြင်ကွင်း
Published: March 12, 20196:27 pm